Waa maxay Sharaxaad ka Bixitaan Ogolaansho La'aan ah? | Martech Zone
Waa maxay Sharaxaad ka Bixitaan Ogolaansho La'aan ah?
Axad, Juun 8, 2014 Jimco, Febraayo 12, 2016 Douglas Karr
Kanada waxay qaadaneysaa mindi hagaajinta sharciyadeeda ku saabsan SPAM iyo tilmaamaha ay tahay in ganacsatadu u hogaansamaan markay dirayaan xiriirkooda emaylka ee cusub. Sharci dejinta Kahortaga SPAM ee Kanada (CASL). Khabiiro ku xeel dheer samatabbixinta oo aan la hadlay, sharcigu ma wada ahan wax iska cad - shaqsiyan waxaan u maleynayaa inay la yaab tahay inaan leenahay dowlado qaran oo farageliya arrimaha adduunka. Ka fikir markaan helno dhowr boqol oo dowladood oo kala duwan oo qoraya sharci u gaar ah… wax aan macquul aheyn.
Mid ka mid ah dhinacyada CASL waa farqiga u dhexeeya muujiyey iyo ku tilmaamay ogolaansho. Oggolaanshaha la muujiyey waa hanaan ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo qofka qaata emailka uu si dhab ah u riixo ama isu saxeexo. Oggolaanshaha maldahan ayaa xoogaa ka duwan. Mar baan la murmay aniga iyo hormuudka adeeg bixiyaasha iimaylka 'wakiilka gudbinta arintan. Wuxuu i siiyay kaarkiisa ganacsiga oo ay ku jirto cinwaanka emaylkiisa - taasna waxaan u isticmaalay sidii ku tilmaamay ogolaansho inaad email ugu dirto joornaalkayga. Wuxuu si toos ah ugu dacwooday adeeg bixiyaha emaylkeyga oo sababaya ruckus. Wuxuu dareemay inuusan wax ogolaansho ah bixin. Waxaan dareemay inay sameysay.
Wuu qaldanaa, dabcan. In kasta oo aragtidiisa shakhsiga ahayd shuruud looga dhigay oggolaansho la muujiyey, ma jiro sharci noocaas ah (weli). Sharciga Mareykanka ee 'CAN-SPAM', uma baahnid ogolaansho la muujiyey ama la muujiyey si aad cid ugu soo dirto emayl… Waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad bixiso farsamo ka bixitaan haddii aadan xiriir ganacsi la lahayn rukunka. Taasi waa sax… haddii aad xiriir ganacsi leedahay, xitaa uma baahnid inaad yeelato ka-bixid! In kasta oo taasi ay tahay qawaaniinta, bixiyeyaasha adeegga emaylka ayaa si aad ah ugu sii fogeeya barnaamijyadooda.
Tusaalooyinka ka soo horjeedka tusaalooyinka Ogolaanshaha
Marka loo eego CASL, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin farqiga u dhexeeya oggolaanshaha ka soo horjeeda iyo kuwa la muujiyey:
Oggolaansho La Sharaxay - Soo booqde bartaada ayaa buuxisa foomka rukunka iyadoo ujeedadu tahay in lagu qoro liiskaaga. Waxaa la soo dirayaa emaylka xaqiijinta ka-bixida kaas oo u baahan qaataha inuu gujiyo xiriir si uu u xaqiijiyo inay rabaan in lagu daro liiska. Tan waxaa loo yaqaanaa laba-doorbid qaab. Markay riixaan xiriiriyaha, taariikhda / waqtiga iyo shaambadda IP-ga waa in lagu duubaa diiwaanka diiwaangelintooda.
Oggolaansho Macno leh - Soo booqde bartaada ayaa buuxisa foom diiwaangelin ah si ay u soo degsato warqad cad ama u diiwaangeliso dhacdo. Ama macaamilku wuxuu ku siinayaa cinwaan emayl ah kaarka ganacsiga ama jeegga. Iyagu si cad umay bixin rukhsad ay doonayeen inay kaaga helaan iimaylka isgaadhsiinta suuqgeynta; sidaas darteed, oggolaansho ayaa la muujiyey - lama sheegin. Weli waad awoodi kartaa inaad u dirto qofka isgaarsiinta emaylka, laakiin kaliya muddo xaddidan.
In kasta oo ku dhowaad shuruudaha bixiyeyaasha email kasta ay sheegaan inaad leedahay fasax, waxay ku siinayaan qaab kasta oo aad ku soo dhoofiso liis kasta oo suurtagal ah oo aad ka heli karto ama iibsan karto. Marka, sirta wasakhda ah ee warshadaha ayaa ah inay tan oo lacag ah ka helaan macaamiishooda iyagoo diraya SPAM inta ay ku wareegayaan warshadaha iyagoo ku qeylinaya inay gabi ahaanba ka soo horjeedaan. Dhamaan tiknoolajiyadaha gudbinta super-duper ee 'ESP', algorithms, iyo cilaaqaadka micno malahan squat… maxaa yeelay iyagu ma xukumaan waxa ka dhigaya sanduuqa. Adeeg bixiyaha internetka ayaa sameeya. Taasi waa sirta weyn ee wasakhda ah ee warshadaha.
Sidee Ogolaashahu Saameyn ugu leeyahay Santuuqa?
Lagu muujiyey ogolaansho maldahan wax saameyn toos ah kuma laha awoodaada inaad ku gaarto sanduuqa! Adeeg bixiyaha internetka sida Gmail malahan wax tilmaam ah markay helayaan emayl ama inaad fasax u heshay inaad dirto iyo in kale… ha ka fikirin xaqiiqda ah in la muujiyey ama aan la sheegin. Waxay xayirayaan emayl ku saleysan ereyga, cinwaanka IP-ga ee laga soo diray, ama dhowr algorithms kale oo ay adeegsadaan. Waxaan ku dari lahaa hadii aad xoogaa lumiso qeexitaankaaga shaqsiyeed ku tilmaamay, waad kaxeyn kartaa warbixinadaada SPAM ilaa ugu dambeyntiina waxaad bilaabi kartaa inaad dhib kuhesho sanduuqa.
Had iyo jeer waxaan dhihi jiray in haddii warshaduhu ay runti doonayeen inay arrinta ku xalliyaan SPAM, ka dibna ka dhig ISPs inay maareeyaan rukhsadda. Gmail, tusaale ahaan, waxay horumarin kartaa API ka-doorbid meesha ay ka ogyihiin in adeegsadahoodu siiyay ogolaansho la shaaciyey si ay iimayl uga helaan iibiye. Ma hubo sababta aysan sidan u yeelin. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharad ku sameeyo waxa loogu yeero ogolaansho ku saleysan adeeg bixiyeyaasha emaylku way qaylin doonaan haddii ay wax walba dhacaan… waxay waayi lahaayeen lacag badan oo ay u diraan SPAM aad u badan.
Haddii aad u direyso emayl ganacsi oo aad rabto inaad cabirto awoodda aad ku leedahay inaad ku gaarto sanduuqa, waxaad u baahan doontaa inaad ka faa'iideysato adeeg sida kuwa kafaala-qaadayaasheena ah 250ok. Kuwa wargeliyaha sanduuqa wuxuu ku siinayaa liis cinwaanadooda ah oo cinwaanno emayl ah si aad ugu darto liiska emaylkaaga ka dibna ay kuugu soo warrami doonaan haddii emaylladaadu ay si toos ah ugu socdaan faylka qashinka ama ay ku sameynayaan sanduuqa. Waxay qaadataa qiyaastii 5 daqiiqo in la dejiyo. Waxaan ku isticmaaleynaa Wareeg Press halkaas oo aan ku aragno meelaynta sanduuqa lagu diro. Adeeggoodu sidoo kale wuxuu kuu sheegi doonaa haddii adeeggaagu uu ku jiray liiska madow ama in kale.
Xeerarka Kanadiyaanka ayaa qaadaya talaabo kale taasna waxay xaddideysaa 2 sano inay u dirto emayl qof kasta oo wata ogolaansho maldahan. Marka, haddii qof aad xiriir ganacsi la leedahay uu ku siiyo cinwaanka emaylkiisa, waad u soo diri kartaa emayl… laakiin keliya muddo cayiman. Ma hubo sida ay u dhaqangelinayaan sharciga noocaas ah. Waxaan u maleynayaa inay bixiyeyaasha adeegga iimaylku u baahan doonaan inay dib-u-habeyn ku sameeyaan nidaamyadooda si loogu daro liistada soo dejinta ee rukhsadda la oggol yahay oo kuu oggolaaneysa inaad ku darto raad-raaca xisaabeed haddii ay jirto cabasho. Oh, iyo CASL waxay u baahan tahay inaad ka hesho ogolaansho cad xiriirada jira ee liiskaaga ugu dambayn Julaay 1, 2017 adoo adeegsanaya a ololaha dib u xaqiijinta. Suuqgeyaasha emayllada ayaa tallaabo adag ka qaadi doona midkaas!
Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan CASL
Cakemail waxay qabatay shaqo fiican oo ah isku dubarida hagaha CASL - waad awoodaa download it halkan. Oh - iyo haddii aad rabto inaad maamusho liiskaaga waxoogaa ka fiican, sii Unroll.me isku day! Waxay la socdaan e-mayl kasta oo ku dhaca sanduuqaaga 'gmail' waxayna kuu oggolaanayaan inaad isku rogto waxyaabaha aad rabto, ama aad ka saarto cinwaanka aad rabto. Gmail waa inuu iibsadaa!
Xusuustii ugu dambeysay ee tan. Ma doonayo dadka waawayn inay u maleeyaan inaan u doodo SPAM. Ma ihi… Waxaan qabaa ogolaansho la muujiyeyxeeladaha emaylka ku saleysan waxay bixiyaan natiijooyin ganacsi oo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale ku dari lahaa inaan macquul ka ahay arrintan oo aan arkay shirkado kobci liistada emaylkooda oo ay markaa ku kobciyaan ganacsigooda iyagoo adeegsanaya dagaal ogolaansho maldahan barnaamijyada.
Tags: keegakaraa-spamcanadaSharci dejinta Kahortaga SPAM ee Kanadaqaslsamatabbixinmuujiyaanogolaansho la muujiyeyku tilmaamayogolaansho maldahandooran injoojintasharciga spam
Sawirka Macaamiisha Mobilka